Ny kaontinao Netflix dia mety ampiasain'ny hafa | Vaovao IPhone
Ny vaovao dia manerana ny tambajotra: kaonty Netflix maro no voajirika ary ny angona fidirana amin'ireo kaonty ireo dia ampiasain'ny olon-kafa. Ny serivisy fampitana haino aman-jery multimedia dia tsy ho iray ihany fa nanimba ny filaminany ary tolotra mitovy amin'izany koa no iharan'izany. Amin'ity tranga ity, dia toa tsy misy olana hafa noho ny hoe mety hampiasa ny serivisy ny olon-kafa, raha tsy misy angona hafa mafampana voasivana, saingy mbola olana goavana tsy maintsy vahan'ny Netflix izany ary raha misy manana ny kaonty olana dia tokony hanamarina eo noho eo raha nisy vokany io. Manome anao ny antsipiriany eto ambany izahay.
Tsy sarotra ny mahita pejy an-tserasera izay manome fidirana tena mora amin'ny serivisy atiny streaming hafa. Tsy ny fahaizana mijery atiny multimédia maimaimpoana, fa ny fampiasana ireo serivisy ireo amin'ny vidiny ambany lavitra noho izay andoavany azy matetika. Mazava ho azy fa tsy misy olona "manome sarotra amin'ny peseta" (euro ho an'ny cents raha manavao ny fotoanantsika isika) ary ireo serivisy natolotr'izy ireo tena manana hafetsena: dia mampiasa kaontin'ny mpampiasa hafa izay voajirika ary izay mpampiasa tsy mahalala fa mitranga izany. Ahoana ny mamantatra raha voakitika ny kaontinao? Tena tsy misy fomba ofisialy hanaovana izany fa manana angon-drakitra ankolaka azontsika ampiasaina hahalalana izany izahay.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny miditra amin'ny kaontinao, jereo ireo piraofilina noforoninao ary jereo raha misy piraofilina vaovao izay tsy fantatrao, na raha ao amin'ny lisitry ny fizarana na sarimihetsika hita dia misy iray izay tsy tadidinao rehefa nahita. Raha izany no anao, na tsia dia tsia te hisoroka ny karazana loza mety hitranga ianao, fidio ny fikirana Netflix avy amin'ny kaontinao amin'ny tranokala ary araho ireto dingana ireto:
Mialà amin'ny fitaovana rehetra.
Ovay ny tenimiafina
Amin'izany dia tsy maintsy miverina indray ianao ampidiro amin'ny tanana ireo kaontinao amin'ny fitaovana ampiasainao amin'ny Netflix, saingy azonao antoka fa tsy hisy olona hanararaotra ny kaontinao izay aloanao ara-pivavahana isam-bolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny kaontinao Netflix dia mety ampiasain'ny hafa
ilovespaol dia hoy izy:
MMM. Saingy tsy afaka milalao amin'ny efijery misimisy kokoa noho ny lazain'ny famandrihana nataonao (2-4-6, sns). Tsara ny tolo-kevitra lazainao, fa ho an'ny olona tsy mizara ny kaonty Netflix azy ihany. Ho an'ireo izay manao, ny fomba tsara indrindra hahalalana fa misy mpiditra ao amin'ny kaontinao dia amin'ny alàlan'ny famantarana ireo fitaovana mifandray. Ohatra, manana ny fisoratana anarana 2-efijery aho ary mizara ny kaontiko amin'ny fianakaviako, avy eo ny roa dia afaka milalao sarimihetsika tsy misy olana, fa ny fahatelo kosa nahazo hafatra toy izao: «Tsy afaka milalao mihoatra ny efijery roa ianao amin'ny Mandritra izany fotoana izany dia havaozina ho efijery 4 bla bla bla ", arahin'io dia asehony anao ny solosaina mifandray sy ny sarimihetsika jeren'izy ireo:" Juan-PC: Terminator 10 "," Lucho's iPad: The Little Mermaid ". Raha sendra anarana tsy fantatra ianao pum! ovay ny teny miafinao ary mivoaha hatraiza hatraiza.
"Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny miditra amin'ny kaontinao, jereo ireo piraofilina noforoninao ary jereo raha misy mombamomba anao izay tsy fantatrao"
Tena misalasala aho fa hamorona mombamomba vaovao ilay mpikomy, satria rehefa miditra ao amin'ny Netflix ny zavatra asehony voalohany dia ny fisafidiananao ilay mombamomba anao. Io no fomba hadalana indrindra avelanao ho hita.
"Na raha ao amin'ny lisitry ny fizarana na sarimihetsika hita dia misy ny sasany izay tsy tadidinao fa efa hitanao."
Araka ny nolazaiko teo aloha, tsara izany, fa ho an'ny olona tsy mizara ny kaontiny.
Tsy ratsy ny lahatsoratrao fa mila voadio tsara. Lucky
Mamaly an'i ilovespaol
iandrade dia hoy izy:
ilovespaol, heveriko fa tsy mila izany voakilasy firy izany, raha manana efijery 2 ianao, raha mbola tsy ampiasainao izy ireo, avelan'ny Netflix hifandray ireo fitaovana tsy "voasoratra anarana" (vakio PC, takelaka, finday ary / na foibe fampitam-baovao sasany).
Raha ny ahy, rehefa misy fitaovana 2 hita ao USE, ary manandrana mampifandray amin'ny fitaovana fahatelo aho (amin'ity farany ity) dia mampahafantatra ahy izy fa ny fifandraisana 2 misy dia ampiasaina bla bla bla, fa na dia misy aza misy izay manana ny fahafahako miditra ao amin'ny Netflix ary manana ny kaontiko aho, hataoko izany nefa tsy fantatro akory.
Mamaly an'i iandrade
kiermel dia hoy izy:
Eny, zavatra mampatahotra no nitranga tamiko androany.
Androany tsy nifandray mihitsy aho satria niasa. Ary rehefa tonga tany an-trano aho ary nijery ny hetsika fizahana hitako Narcos, dia gaga aho satria mbola tsy hitako. Ka nandeha tany amin'ny "fidirana farany amin'ny kaonty aho." Ary hitako fa androany dia nifandray indroa tamin'ny iPhone izy ireo ary indray mandeha tamin'ny PC ary omaly tamin'ny iPad avy any Suisse. Zurich manokana kokoa, izay hitako tamin'ny alàlan'ny IP.
Mandeha amin'ny Profiles aho ary hitako fa misy iray izay tsy nantsoiko hoe Default, ary rehefa miditra aho dia hitako fa nahita toko maromaro tamin'ny Narcos ianao. Nofafako io mombamomba io ary novaiko ho lasa lava kokoa sy sarotra kokoa ilay teny miafina. Bummer mila miditra indray amin'ny fitaovana marobe.
Mazava fa nisy niditra tao amin'ny kaontiko ary nampiasa azy androany.
Koa mitandrema, tandremo fa misy HDP maro any.
Mamaly an'i kiermel
Manana ho avy ho toy ny console ve ny Apple TV? Eny ny valinteniko
IPhone 6 Plus no may tao am-paosin'ny tompony